विकास बाहेक कुनै सपना छैन– अधिकारी - Everest Dainik - News from Nepal
विकास बाहेक कुनै सपना छैन– अधिकारी
विकास उधारो होइन हातहातै – थापा
पोखरा २, मंसिर । बाम गठवन्धन कास्की क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार रविन्द्र अधिकारीले विकास बाहेक आफ्नो कुनै स्वार्थ र सपना नभएको बताएका छन् ।
अधिकारीले जनताले दिएको म्यान्डेटलाई आफुले उच्चतम सम्मान गर्दै कास्कीका मात्र नभई देशलेनै गौरव गर्नेगरी आगामी दिनमा अझै रचरात्मक काममा अघि बढ्ने बताए । पाँच बर्षमात्रै हामीलाई म्यान्डेट दिनुस् त्यसपछि भोटमाग्न आउन नपर्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं।
याे पनि पढ्नुस किन पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल उडानका लागि अयोग्य ? कारण यस्तो छ-
याे पनि पढ्नुस संगठन सुदृढीकरणका लागि जनतामाझ पार्टी पुग्नु अपरिहार्य छ : सभापति देउवा
याे पनि पढ्नुस मनकारी दम्पतीः जसले करोडौंको सम्पत्ति अस्पताललाई दिए